Maxay tahay sababta ay kooxaha reer Manchester isaga diideen inay sameeyaan saxiixa Arturo Vidal? – Gool FM
Maxay tahay sababta ay kooxaha reer Manchester isaga diideen inay sameeyaan saxiixa Arturo Vidal?
Dajiye August 4, 2018
(Manchester) 04 Agoosto 2018. Sida ay wararku xaqiijinayaan maanta oo sabti ah kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa waxay iska diideen saxiixa xidiga xulka qaranka Chile Arturo Vidal.
Kooxda Barcelona ayaa ku dhawaaqday saxiixa laacibkai kooxda Bayern Munich, kadib markii ay kula soo saxiixatay 19 million euros, isagoo mushaar ahaan u qaadan doono sanadkii aduun dhan 9 million euros.
Wargeyska “Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in labadan kooxood ee Manchester United iyo Manchester City ay iska diideen saxiixa Vidal bishii lasoo dhaafay. Sabaab la xiriira da’adiisa weyn iyo dhaawaca uu ka qabo dhanka Jilibka.
32 jirkan ayaa maray laba qaliin ee dhanka jilibka ah xiliyadii lasoo dhaafay, taasoo sababtay in kooxaha reer Manchester ay iska diideen saxiixiisa.
Manchester United oo hal talaabo u jirto saxiixa difaaca kooxda Barcelona Yerry Mina
Kooxda Inter Milan oo dalabkan cajiibka ah kaga yaabsatay Real Madrid si ay kaga hesho Luka Modric